बालबालिका र मास्कको प्रयोगको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा | Ratopati
personयुनिसेफ नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १९, २०७७ chat_bubble_outline0
बालबालिकालाई कोभिड १९ को कुनै लक्षण नभएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक स्थलमा रहँदा अनुहारमा मास्क लगाएर उनीहरूले कोभिड १९ सार्नबाट रोक्न मद्दत गर्न सक्छन् र आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदायसँगै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दछन् ।
हामीले बालबालिकालाई उनीहरूले दैनिक जीवनमा मास्क कसरी लगाउनुपर्दछ भनेर मुख्य सुझावहरू प्राप्त गर्न युनिसेफका स्वास्थ्य विशेषज्ञ श्रीहरि दत्तसँग कुरा गरेका थियौं ।
मास्कले कसरी काम गर्दछ?
कोभिड १९ मानिसहरूले कुरा गर्दा, गाउँदा, खाँदा वा खोक्दा बन्ने श्वासप्रश्वासका थोप्लाहरू मार्फत फैलिन्छ । व्यक्तिहरूको शरीरभित्र कुनै पनि लक्षणविना पनि भाइरस रहेको हुन सक्दछ । यसको मतलब तपाईं र तपाईंका बालबालिकाले रोग सार्न सक्नुहुन्छ र तपाईंहरुलाई यो थाहा नहुन पनि सक्दछ ।
मास्कले कोभिड १९ का छिटाहरु फैलिन नदिइ अन्य व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्ने काम गर्दछ । मास्कले लगाउने व्यक्तिलाई सासको थोपाहरू लिन र संक्रमित हुनबाट पनि जोगाउन सक्दछ ।
बालबालिकाले कहिले मास्क लगाउनुपर्दछ?
तपाईंको बालबालिकाले मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा धेरै कुराहरूमा निर्भर हुन्छ । उनीहरूको उमेर, सुरक्षित रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने क्षमता र उनीहरू बिरामी भएका कोहीसँगको भौतिक सम्पर्कमा छन् की छैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छन् । दक्षिण एसियाभरि, केहि सरकारहरूले सार्वजनिक र उमेरमा आधारमा मास्क प्रयोगका थप आवश्यकताहरू निर्धारण गरेका छन् । तपाईंको स्थानीय निकायहरुको निर्देशहरूको बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।
केही देशहरूले धेरै साना बालबालिकाको लागि मास्क प्रयोगको बारेमा थप स्थानीय मार्गदर्शनहरु जारी गरेका छन् । उदाहरणको लागि, यदि बालबालिका कोही बिरामी भएकाहरुसँग भौतिक रूपबाट नजिक छन् भने । यदि तपाईंको ५ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाउनु आवश्यक छ भने, उनीहरु सधैं तपाईंले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरि प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
Photo courtesy: Pradip Pradhan
० कोभिड १९ तपाईंको क्षेत्रमा व्यापक रुपमा फैलिएको छ कि छैन ।
० तपाईंको बालबालिकाले सुरक्षित र उपयुक्त रुपमा मास्क प्रयोग गर्न सक्दछन् की सक्दैनन् ।
० तपाईंको मास्कमा पहुँच छ की छैन र तिनीहरूलाई धुन र प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ।
० बालबालिकाले मास्क लगाइरहेको वयस्कले सुपरिवेक्षण गर्न सक्दछन भने ।
० तपाईंका बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा कसरी मास्क लगाउने, फुकाल्ने र राख्ने तरिका जानेका छन् की छैनन् ।
० तपाईंको बालबालिकाले गम्भीर बिरामी हुने उच्च जोखिममा भएका अन्य व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् की छैनन् । उदाहरणको लागी, वृद्ध र स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरु ।
मास्क लगाउने कारणले तपाईंको बालबालिकाको व्यक्तिगत सिकाइ र मनोवैज्ञानिक विकासमा हुन सक्ने सम्भावित प्रभावलाई पनि तपाईले विचार गर्नुपर्दछ । तपाईंको बालबालिकाका शिक्षकहरू वा चिकित्सा प्रदायकहरूसँग परामर्श गरेर यो विषयमा निर्णय लिनुहोस् ।
यसको अर्थ यदि तपाईंको क्षेत्रमा कोभिड १९ व्यापक रुपमा फैलिएको छ भने उनीहरुले सबै सार्वजनिक स्थानहरुमा मास्क लगाउनु पर्दछ, रः
० अरुबाट एक मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्न गाह्रो छ भने (उदाहरणः भीडभाड भएको सार्वजनिक स्थानहरूमा), वाः उनीहरू भित्री सार्वजनिक ठाउँमा छन्।
बालबालिकाले कुन बेला मास्क लगाउनुपर्दैन?
बालबालिकाले मास्क लगाउनुपर्दैन जबः
० उनीहरू घरमा छन् र घरका कोही पनि बिरामी भएका छैनन्।
० उनीहरू अन्य व्यक्तिबाट हरेक समयमा कम्तिमा १ मिटरको दूरी कायम राख्न सक्दछन्।
विभिन्न प्रकारका मास्कहरू र तपाईंको बालबालिकाले कुन लगाउनु पर्दछ
गैह्र चिकित्सकीय मास्कको रूपमा पनि चिनिने कपडाको मास्कहरू प्रायः कपासले बनेका हुन्छन्। तिनीहरू विभिन्न शैली र रंगहरूमा आउँदछन् र तिनीहरुलाई धुन र पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रभावकारी हुनको लागि, तिनीहरूलाई कम्तीमा कपडाको तीन तहको बनाउनु पर्दछ।
बालबालिकासहित धेरै व्यक्तिहरुलाई यस प्रकारको मास्क लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)सिफारिस गर्दछ ।
कपडाको मास्कलाई प्रत्येक प्रयोगपछि साबुन वा डिटर्जेन्टको प्रयोग गरी तातो पानीमा दैनिक रुपमा धुनु पर्दछ। यसरी धोएपछि, मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्नुअघि पूर्ण रूपमा सुक्न दिनुहोस् ।
कपडाको मास्क महँगो पर्न सक्दछ, तर तपाईं आफैले आफ्नै घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीको कारण मेडिकल मास्कहरुको आपूर्ति कम भइरहेको छ । त्यसैल केही समूहले मात्र यस्तो प्रकारको मास्क लगाउनु पर्दछ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गर्दछ । यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, ६० वर्ष भन्दा बढि उमेरका, अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्या भएका, कोभिड १९ भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने र कोभिड १९ को लक्षण भएका वा वा पुष्टि भएका वा संक्रमित व्यक्तिहरू पर्दछन्।
० तपाईंको बालबालिकाको मास्कले उनीहरूको मुख, नाक र चिउँडो छोप्नुपर्दछ, र छेउमा कुनै खाली ठाउँ हुनुहुँदैन र उनीहरूको आँखाको दृष्टिलाई छेकेको हुनुहुँदैन ।
० तपाईंको बालबालिकाले मास्क लगाएर छिटो छिटो हिँड्दा र कुरा गर्दा आरामसँग सास फेर्न सक्नुपर्छ ।
० तपाईंको बालबालिकाले मास्क लगाउनुअघि र त्यसलाई हटाएपछि साबुन र पानीले हात धुनुपर्दछ भनेर थाहा पाउनुपर्छ ।
मास्कको विषयमाः गर्न हुने
तपाईंको बालबालिकालाई मास्क लगाउँदा उनीहरुले निरन्तर पालना गर्नुपर्ने उपायबारे जानकारी भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्ः
० उनीहरूले कम्तीमा ४०— ६० सेकेण्डसम्म बारम्बार साबुन र पानीले वा २०— ३० सेकेन्डसम्म अल्कोहल भएको सामग्रीको प्रयोग गरी हात धुने् ।
० अन्य व्यक्तिहरुबाट कम्तिमा एक मिटर दूरी कायम राख्ने र भीड भएको ठाउँहरूबाट टाढा रहने ।
० खराब भेन्टिलेसन भएको भित्री स्थानहरु (इनडोर) बाट टाढा रहने ।
तपाईं बाहिर भएको समयमा मास्क भण्डार गर्न सकिने झोला साथमा राख्नुहोस् ।
यदि तपाईं र तपाईंको परिवारले मास्क खोल्ने र तथा दिनको समयमा पुनः प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ भने, तिनीहरूलाई भण्डार गर्न सफा र पुनः सिल गर्न मिल्ने झोला बोक्नुहोस्। यहाँ केहि सुझावहरू छनः
० तपाईंको परिवारमा प्रत्येक मास्कको लागि छुट्टाछुट्टै झोला प्रयोग गर्नुहोस्।
० झोलामा मास्क छिराउँदा वा निकाल्दा, यसलाई इलास्टिक लुप वा डोरीमा समाउनुहोस्।
० मास्कको सतहमा नछुनुहोस्।
० मास्क फेरि लगाउनु अघि हात धुनु नबिर्सनुहोस्।
यी छ वटा साधारण गल्तीहरू नगर्नुहोस्:
तपाईंको बालबालिकालाई मानिसहरूले मास्क लगाउँदा बारम्बार गर्ने यी ६ वटा साधारण गल्तीहरू पहिचान गर्न सक्दछन् की सक्दैनन् भनेर सोध्नुहोस् । (उत्तर तल छन्)
० मास्कलाई नाकमुनि नतान्नुहोस्।
० आफ्नो चिउँडो खुला नछोड्नुहोस्।
० आफ्नो चिउँडो मुनि मास्क नतान्नुहोस्।
० माक्स लगाउँदा त्यसलाई नछुनुहोस्।
० खुकुलो मास्क नलगाउनुहोस्।
० फोहोर, बिग्रिएको वा भिजेको मास्क नलगाउनुहोस्।
एक जनाले लगाएको मास्क अर्कोले नलगाउनुहोस् ।
एक जनाले लगाएको मास्क अर्कोले लगाउँदा भाइरस सर्न सक्छ। तपाईंको बालबालिकासँग आफ्नै मास्क भएको र अरूसँग मास्क नसाटेकोे सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
व्यायाम गर्दा मास्क नलगाउनुहोस् ।
बालबालिकाले (र वयस्कहरू) खेल्दा वा व्यायाम गर्दा मास्क लगाउनु हुँदैन। पसिनाले मास्कलाई भिजाउन सक्छ र सास फेर्न गाह्रो हुनुका साथै कीटाणुहरूको वृद्धि सजिलो हुन्छ।
तपाईंका बालबालिकालाई घर वा बाहिरका लागि मास्कको आवश्यक नपर्ने गरि अरूबाट सुरक्षित शारीरिक दूरी कायम गर्न सकिने व्यायाम गर्नको लागि ठाउँ छनौट गर्नुहोस् ।
बालबालिकालाई मास्क लगाउन कसरी प्रोत्साहित गर्ने?
कोभिड १९ ले संसारभर नै तनाव, चिन्ता र कठिनाइ सिर्जना गरी पारिवारिक जीवनलाई उदास बनाएको छ। धेरै बालबालिकाको लागि मास्कले यस्तो भावनाहरुलाई थप्न सक्छ। विशेष गरी, ससाना बालबालिकाको लागि, मास्क लगाउनु अचम्म र रीस उठ्दो हुन सक्दछ।
तपाईंको परिवारमा मास्कलाई चिनाउन सहयोग पु¥याउने केहि उपायहरू तल उल्लेख गरिएका छन्ः
इमानदार र सहयोगी हुनुहोस्। मास्क हामीमध्ये कसैको लागि अति रमाइलो बस्तु होइन भनेर पहिचान गर्नुहोस्। तर मास्क लगाएर हामीले बृद्ध मानिसहरुसहित आफू वरपरका मानिसहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर वर्णन गर्नुहोस् । मास्क लगाउनुले हामी एक अर्काको ख्याल राख्दछौं भनेर देखाउँदछ ।
कोभिड १९ लाई रोक्न कठिन मेहनत गर्ने धेरै विशेषज्ञहरू छन् तर उनीहरूलाई हाम्रो मद्दत चाहिन्छ । यसका लागि हामीले हरेक प्रकारको सावधानी अपनाउनुपर्दछ भनेर उनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् ।
मास्क लगाउने बानी विस्तारै विकास हुँदैछ । त्यसैले, बालबालिकालाई नियमित रुपमा सम्झाइरहनुहोस् र तपाईंको आफ्नै व्यवहारलाई उदाहरण बनाउनुहोस्।
मास्कलाई रमाइलो बनाउनुहोस्। एउटा मास्क वा कपडा छान्ने कामलाई रमाइलो बनाउने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको बालबालिकालाई यो रमाइलोमा सकेसम्म संलग्न गराउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईंका बालबालिकाले उनीहरूको मास्कको रूप र डिजाइन जति मन पराउँछन्, तपाईं वरिपरि नहुँदा पनि उनीहरूले माक्स लगाउने सम्भावना त्यति बढी हुन्छ।
साभार : युनिसेफ
अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरसँगै अक्सिजनको अभाव
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ४४ हजार नाघ्यो, ५ हजार ७४३ जनामा संक्रमण पुष्टि
भदौमा ७३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो, वैदेशिक रोजगारीकालागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने ९९ प्रतिशतले घटे
चालु खाता साढे २२ अर्ब भन्दा बढीले बचतमा, वैदेशिक लगानी २३.३ प्रतिशतले वृद्धि